Hddo | Kyaw Chan Thar (KCT) Co., Ltd.
Tekma Mega X 15W40 (Super High Performance Diesel)
Standard – ACEA E7, API CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/ SL
Approvals – MACK EO-N,MB-APPROVAL 228.3,RVI RLD-2,VOLVO VDS-3,KAMAZ approval(for EURO 3/4/5)
Packaging – 1L,5L,20L,200L
Suitable – ဥရောပ၊ အမေရိကန် နှင့် ဂျပန်စက်ယန္တရားကြီးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥရောပမီးခိုးထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော EURO III နှင့် EURO IV စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် Heavy duty နှင့် ယန္တရားကြီးများအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကျပြီး သက်တမ်းအိုမင်းသော ဒီဇယ်ကားငယ်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Performances – Cummins 20071-20072-20076-20077-20078,CAT ECF 2,MAN M3275,MTU Type II, Global DHD-1, Scania, IVECO,DAF when ACEA E3/E5 is required.
Tekma Mega X 20W50 (Super High Performance Diesel)
Standard – API CI-4/SL
Packaging – 20L,200L
Performance – ACEA E7;CUMMINS 20071-72-76-77-78,MAN M 3275-1,GLOBAL DHD-1,MACK EO-M Plus,MB 228.3, VOLVO VDS-3, CAT ECF-1a, RANULT RVI RLD/RD-2,MTU Type II.
Standard – API CI-4
Standard – API CF-4/SG